को हुन् चिनियाँ नोबल पुरस्कार विजेता जिआबो ? – Everest Dainik – News from Nepal
को हुन् चिनियाँ नोबल पुरस्कार विजेता जिआबो ?
काठमाडौं, असार ३१ । लामो समयदेखि जेलमा रहेर बिहीबार निधन भएका एकजना चिनियाँ अधिकारवादीको विषय आफ्नो आन्तरिक भएको चीन सरकारले जनाएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता चिनियाँ अधिकारकर्मी लिउ जियाओबोको बिहीबार ६१ वर्षको उमेरमा निधन भएपछि विश्व समुदायमा विभिन्न टीकाटिप्पणी आएका छन् ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सुआङले यस विषय चीनको आफ्नो आन्तरिक मामिला भएकाले उनी एकजना व्यक्तिलाई अघि सारेर कुनै पनि विरोधी प्रतिक्रिया नदिन पनि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
लिउको प्रख्यात उखान ‘मेरा कोही शत्रु छैनन्, कोहीप्रति घृणा छैन’ लाई उनको मृत्युपछि धेरै प्रशंसकले विबोमा पोस्ट गरेका थिए । ‘मेरा कोही शत्रु छैनन्, उनीहरूप्रति मेरो कुनै घृणात्मक सोच छैन । मलाई पक्राउ गरी निगरानी गर्ने प्रहरी, सरकारी अभियोजनकर्ता र मविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीश मेरा शत्रु होइनन्,’ सन् २००९ मा लिउले भनेका थिए । प्रशंसकले उनको लेखन र कवितालाई उद्धृत गरेका छन् । ‘निश्चय नै तपार्इं स्वतन्त्रताका सहिद हुनुहुन्छ,’ एक प्रयोगकर्ता लेख्छन्, ‘हत्याराले माफी पाउने छैन ।’